”Ku dhufo halka xanuujinaysa!” – Kenya oo keentay arrin ay ku ”ciqaabayso” Somalia & Amnesty oo ka digtey! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Ku dhufo halka xanuujinaysa!” – Kenya oo keentay arrin ay ku ”ciqaabayso”...
”Ku dhufo halka xanuujinaysa!” – Kenya oo keentay arrin ay ku ”ciqaabayso” Somalia & Amnesty oo ka digtey!
(Nairobi) 27 Maarso 2019 – Kaddib markii uu soo baxay war sheegaya in Kenya ay qorshaynayso inay albaabada isugu dhufato xerada qaxootiga Dhadhaab dhamaadka bisha Agoosto ee soo aaddan, waxaa arrintaa ka qayla dhaamisay hay’adda Amnesty International.
”Dadkani waxay iskugu jiraan rag, haween iyo carruur kasoo cararay khilaafaad hubaysan iyagoo lafahooda u cabsanaya, waxaana loo gaystey meel ka dhacyo kale oo dhanka xuquuqda aadminimada ah.” ayuu yiri Maareeyaha Fulineed ee Kenya u jooga AI, Md Irungu Houghton.
Amnesty ayaa sheegtay inay Kenya horseedeeyso musiibo aadminnimo haddii ay khasab ku celiso qaxootiga Soomaalida ah, iyadoo aan samaynin la tashi, qorshayn iyo qiimayn ku aaddan badbaadadooda.
Go’aan kasta oo khasab loogu celinayo qaxootiga Soomaalida ihi wuxuu ka hor imanayaa go’aankii Maxkamadda Sare ee Kenya oo Febraayo 2017-kii xukuntay qorshe lasoo jeediyay 2016 oo lagu xiri lahaa xerada Dhadhaab, taasoo ay maxkamaddu ku tilmaantay mid aan dastuuri ahayn marka la eego dastuurka qaran ee Kenya iyo midka caalamiga ah intaba.
Kenya ayaa samaynaysa isku dayo fara badan oo ay ku doonayso inay Soomaaliya ku cadaadiso muran ay iyadu iskeed u asaastay oo ay ku sheeganayso dhul badeed ku yaalla xadka dhanka badda ah ee labada dal.
Previous article”Milan waa naadi qara wayn!” – Laacibka Everton oo qish bixiyay
Next articleIsku aadka Koobka Horyaallada Caalamka (ICC) oo lasoo saaray (Sidee la isu arkayaa?)